Igumbi lomlingo/elipholileyo (kufutshane ne-App Ski Mtn) - I-Airbnb
Igumbi lomlingo/elipholileyo (kufutshane ne-App Ski Mtn)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJasmine
Indawo yethu ikufuphi ne-ASU, i-15 min ukusuka kwi-App Ski Mtn. Indlu inobushushu obuninzi, uthando noxolo kuyo. Mna noDave endihlala naye apha sinamagumbi ayi 2 esirentisa ngawo. Ubumelwane bukhuselekile kwaye bunobubele. Kukho ukufikelela ekupheleni kwendlela yam eya eGreenway. Nceda uqaphele, asamkeli iindwendwe ezifika emva kwe-10pm. Kwakhona sinenja eswiti kodwa ngamanye amaxesha ikhonkotha kakhulu xa abantu bengaphandle. Okwesibini ufika endlini uya kuba sweet kangangoko.
Sithanda indlu yendalo kunye nelula. Iyadi ikhethekile kakhulu - Kukho imithi emininzi, iigadi kunye nobomi bendalo. Kukho itafile yepikiniki ethandekayo kunye ne-hammock ngasemlanjeni. Ngexesha lasehlotyeni, siyakonwabela ukubamba iiphotlucks kunye nemililo yaselumelwaneni. Ebusika, ukuzisonga eziko kusezulwini.
Qala intsasa yakho ngemagi eshushu evela kwikofu yethu kunye nebha yeti. (Idla ngokuzaliswa ngeziselo zendalo.)
Indawo yethu ilungile kumaqabane, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho ezinabantwana abadala kunye nezinja eziqeqeshelwe indlu.
4.90 · Izimvo eziyi-618
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi618
Indawo ekhuselekileyo kakhulu. Uninzi lwabantwana ludlala kwesinye sezitrato ezisingqongileyo, indlela yebhasi ikude nezindlu ezimbalwa. Indlela eluhlaza iqhotyoshelwe ebumelwaneni. Ivenkile yegrosari ingaphaya kohola wendlela. Iintaka ziya kucula, kwaye umlambo uya kuba namanzi angqungqayo kwaye abengezela. Le yindawo entle ngokwenene. Ikufuphi nedolophu (5 -7 min) kodwa ikude ngokwaneleyo ukuba indalo ikujikelezile.
Umbuki zindwendwe ngu- Jasmine
UDave kunye nam sihlala sifumaneka ukuba ufuna uncedo ngexesha lokuhlala kwakho. Sikwanabo nabamelwane abakhulu abanokunceda xa singafumaneki. Singakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boone